QABSOO FINIINSUUN…WAREEGAMTOOTATTI. KABAJAA HORUUDHAA !!! – kutaa 3ffaa – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooQABSOO FINIINSUUN…WAREEGAMTOOTATTI. KABAJAA HORUUDHAA !!! – kutaa 3ffaa
SEENAA Y.G (2005) kutaa 3ffaa – Ebla 10, 2018
Biyyi Itoophiyaa jedhamtu haala yaaddeessaa keessa jirtii.Ummatoonni Biyyattis,adeemsa jiruu ilaalanii itti baha isaa wallaalanii, waan dhufu daawwachuu qofaaf of daangeessanii jiru. Biyya keessaa fi alaan hunduu muddamsuu keessa jira. Ummati Xumura wayyaanee arguuf jarjareera.Kaan gumaa baafachuuf qajeelfama eeggataa jira.Ummatoonni sirnicha hudhanii qabaniiru.Qabsaa’oonni haqaa,qabaa isaanii jabeessaa jiru.Humnoonni alaa waan nuuti jennuu raawwatuu qabaa jechaa jiru. Warri saamicha baree, dhiiga lammii keenyarra tarkaanfatanii, saamicha isaaniif wayyaanee sossobatu. Gareen TPLF ajandaa mataasaa qabatee maraachaa jira.Dhaabbileen mormitootaa Biyya keessaa hidhaan osoo isaa hin daangeessine ,ejjannoo qabanitti cichaajiru. Dinagdeen Biyyatti gadi bu’eera. Wal amantaan maatii keessattillee hin jiru. Akka mootumaan dhaabbachuun hafee, gareetti ce’aa jira.Ajjeechaan hunda caalaa dubbii hammeessaa fi booreessaa jira. Kanaaf Biyyattiin afuura dhabaa jirtii.Mummichi ministeeraa yeroo gabaabaa kana keessatti adeemsa isaa ibsuun rakkisuus, akkiitti jiru irraa, waan furmaata kennee Biyyattii afuura baafachiisuu hinfakkaatu. Egaa waan walxaxaa kana keessaan bu’aa keenya ilaallannee, waan wareegama hedduu itti kafallee asiin ga’annee jirru itti fufsisuuf, adeemsa keenya tolfachuun murteessaadhaa. Olaantummaan siyaasa Qabnu itti fufsiisuuf, adeemsa keenya hegaree tolfannee furmaata taanee of argamuu nu barbaachisa.
Muddamsuun biraa Ummata qalbii hirsiisee jiru, Mummichii Ministeeraa,Dhaabbiilee Siyaasaa Biyyakeessaa fi alaaf waamicha gochuu,,,,Dhaabbileen siyaasaas waamicha kanaaf deebii laachaa jiraachuu,,,,shira wayyaanee waggaa 27,,,,akkasumas,humnoonni alaa mootummaa ce’emsaa dhaabbachuu akka qabu cichanii jiraachuu fi wayyaaneen dantaa isheef jettee humnoota alaa hawwachuuf shira gaggeessituu kkf dha.kana malees,adeemsa kana yennaa ilaalluu,ammalleeBiyyi Itoophiyaa jedhamtuu fi siyaasi Biyyatti shakkisiisaa ta’uu mirkaneessa.
Humnoonni alaa addatti Ameerikaan haala Biyyatti ilaaluu fi dantaa hegaree hegaree ishee tolfachuuf sirni ykn mootummaan ce’umsaa dhaabbachuu qabaa,,,,dhaabbilee siyaasaa hunduu keessatti hirmaachuu qabuu jettii.kanaanis dirqisiisuu barbaadu.
Wayyaaneen gama isheen mootummaa ce’umsaa osoo hin taanee, yeroo ce’umsaa gootee, dhaabbilee siyaasaa Biyya keessaa qofaa Filannoo itti aanutti hirmaachisuu ykn mootummaa ce’umsaa dhaabuuf yoo dirqamtellee, dhaabbilee siyaasaa qawween Falmaniis Filannoo keessatti akka hirmaatan taasiisuudha.
Dhaabbileen siyaasaa Biyya keessaa yoo wayyaaneen amanamaa ta’ee waliin hojjannaa jedhuu. Gama biraan warri kaanis hirmaachuu qabuu jedhuu. Warri qabsoo Bilsummaa isaanii gaggeessan ammo, wayyaanee fi isaan gidduu qaamni sadaffaa bakka argamutti ni haasofnaa jedhu.
Garee 4ffaan humnoota ykn Biyyoota Itoophiyaa keessaan dantaa qaban dantaa isaaniif jedhanii shira gaggeessuu barbaadan jiru.
Dhimma Ertiraan wal qabatee Adeemsi jiru haallan jiran kana diiguu ykn milkeessuu akkaataa itti danda’uutu jira.
Haallan kanarraa kaanee adeemsa kaayyoo keenya ittiin milkeeffannu qopheeffachuun barbaachisadhaa.
Humnoota alaa ilaalchisee :
Humnoonni alaa Adda durummaan Ameerikaa gama ilaallatuun dubbi jirutti gammachuu akka hin qabneetu mul’ataa. Waggaa tokko asitti adeemsa wayyaanee addatti chaayinaa fi Raashiyaa waliin qabdurraa ka’anii adeemsa mataa isaanii qabaachuu fi kanas sirreeffachuuf qabsoon Ummatootaa jabaachutti hirkatanii wayyaanee dhaabuu barbaadu.Amma dantaa isaanii kana akka jirutti dhiifnee, waan itti jiran akka jabeessaniif dhidhibuutu nurraa eegama.Mummicha ministiraa Filamuun dura Dr.Abiyyiif sagalee akka kennan ibsan. Ega Filamee boodas deeggarsa isaanii ibsanii, Angoo karaa nagaa dabarsuun aadaa gaariidhaa jedhan. Angoon Paartii tokko keessatti waliif dabarsan eessaan fakkeenya akka ta’uu namaa galuu baatuus, yaada kana akka kaasan irratti hojjachuu qabnaa.Keessattu ejjannoo Ameerikaa fi warrakaanii kana addabaasanii hiriiraa fi xalayaadhaan addunyaatti beeksiisuudhaa. Waan nama qaaneessuu ittin jedhaa. Inni kaan Abiyyi waan dhufeef sochiin jiru laafatee mul’achuu hin qabu. Addatti wanti irratti hojjachuu qabnuu, Mummichii Ministiraa Oromoo waan ta’eef, Oromoon akka hin callifnee humnoota kanaaf mirkaneessuu qabnaa.Tarii isaanuu waan kana wayyaanee gorsani ta’aa.Sochii keenya bakka hundaa Bifasaageeddarree itti fufsiisu qabna.Miidiyaa jirutti dhimma ba’anii komee kana dhageesifachuun gaariidhaa
Wayyaanee gamailaa llatuun:
Wayyaaneen dantaa ishee eegsifachuuf karaa lama deemaa jirtii.Inni tokko,,,sochii jiru qabbaneessuu….inni lammaffaa…dhaabbilee siyaasaa Biyya keessaa fi alatti adda baaftee Filannoo 2020 irratti hirmaachisuudhaa. Wayyaaneen ejjannoo humnoota alaa laaffifattee karaa isheef tolutti tarkaanfachiisuuf, namoota hiikuu…intarneeta gadhiisuu kkf raawwachaa jirtii. Sochii keenya laaffifnaan egaa waan kana mirkaneessinaaf jechuudhaa. Kanaaf sochii keenyaa bifaa fi adeemsa isaa gageeddarree waan jirutti gammachuu akka hin qabnee ibsachuun barbaachisaadhaa. Kana Qofaa osoo hin taanee, Dr.Abiyyi dhufuun qabsoo keenya jabeessa moo ,,laaffisaa ? bakka sana taa’uun nu gargaara moo hin gargaaruu ? yeroo kennineefii isa ilaalla moo hin ilaalluu ? yoo kennineef maaltu dhufa ? yoo kennuu baannee maal argannaa ? jennee ilaallachu nu barbaachisa.
Dhaabbilee Siyaasaa Oromoo fi Hawaasummaa ilaalchisee:
Har’arra dhaabbannee Tokkummaaf hin boonyu.Sochiin Biyya keessaa kanaaf ragaadhaa.Garuu caalaatti qaawwaa cufachuun ka danda’amuu ,yoo xiqqaatee gamtaa ummachuun yoo danda’ameedhaa. Yeroon Oromoon caalaatti wal barbaachuuf jiru dhihaachaa jira.Akka hawaasaattis ta’uu akka dhaaba siyaasaatti yeroon itti waliif birmaachuuf jennuu dhihaachaa jira.Yeroon Oromummaa qofaaf itti wal barbaannu fagoo miti.Yeroo sanatti waan barbaannu milkeessuuf har’umaa yoo xiqqaatee daandii waliin haasa’uu danda’an yoo ummatan qofaadhaa.kanaaf Biyya keessaas ta’ee Alaa akka jirru kanatti waan nu eeggatu yeroo isaatti milkeeffachuu hin dandeenyu. Akka salphaatti dhaabbileen siyaasaa Oromoo addunyaa kana irraa, 15 ol ta’uu.Ka hawaasummaa lakkaawu dhiisuu wayyaa. Kun boruuf nu miidhaa.Keessattu biyya keessatti.Haala kana akkaataa itti furuu dandeenyutu jira. Waggoota 15n dabran irraa waa hedduu baranneerra. Kacichee jiruus, ka foxxoqee ba’ees, eessa akka jiran numa beeknaa. Kanaaf walirraa fageenya kana uumuuf, diinni nu ajjeesuuf wal jabeessaa jiraa, nuutimmoo ajjeefamuurraa wal baraaruuf, dantaa dhuunfaa dhiifnee walitti deemuu haa eegalluu. Ka ilaalcha wal fakkaataa qabuu walitti haa baqu.Yoo baayyatee Ilaalcha sadin socho’uu dandeenya.Ilaalcha ABO ka qabu ABOtti yoo deebi’ee, Ilaalcha ADO ka qabu Biyya keessaas alaas yoo walitti ititee rakkoo kana hin furannuu ? kanaan ala ka jiru, beekumsa, ogummaa fi kkf dirre siyaasaa irratti wal qabuu dhisee dirreen qabsoo gama hundaan ta’uu akka danda’utti amanee, hegaree Oromiyaaf waan barbaachisuu hojjachuurratti osoo bobba’ee galma keenya mirkaneeffannaan jedha.
Gareelee addaa ddaa ilaalchisee :
Gareelee kana dhaabbilee siyaasaa fi biyyoota olla dantaa Itooophiyaa keessaa qabanii ilaallta.Dhaabbileen siyaasaa maqaa Itoophiyaan ijaaraman addatti amaaraa fi Tigiree, Qabsoo Oromoo deeggarurra, wayyaaneef jireenya hawwan.kun dantaadhaa.Boruu dantaa isaaniif Oromoo irra wayyaaneema har’aaa baaran filatu.Kanaaf jara kana haalaan eeggachuu barbaachisa. Qabsoo wareegama ulfaataa itti baasaa jirrullee dubbachuu hin fedhan.Yoo dubbatan isa kka oduutti malee akka deeggarsaatti miti. Warri kaan Qabsoo Oromoon wal qabatee Biyyoonni olla itti hin tollee ni jiru. Wayyaaneef meeshaa ta’an ni jiru. Harka walkeessa naqatanii nu laaffisuu fedhanillee ni jiran. Kanaaf waan qabnuun of dandeenyee adeemsa isaanii seenaaf keenyee, deebii isaaf bilisummaa booda ittin jehuu nu barbaachisa.garuu summii isaan facaasan ofirraa ittisuun barbaachisaadhaa.YOO kana dhugeessinee,,,”QABSOO FINIINSINEE,,WAREEGAMTOOTATTI KABAJAA HORRA” jechuudha.
****KUTAA 4FFAA keessatti , boriif akka nuuf ta’utti, addatti waggoota 13n dabran sochii qabsoo ABO + QEERROO + UMMATA OROMOO maalirratti akka xiyyeeffatee fi Injifannoo Galmeesisee isin dubbisiisa. Isa booda dhugaa dubbachuuf dirqamna.Yoo maraannees….Ilma Abbaa dhabsiisaa jiraannaa !!!!!!!!!safuu !!!
QABSOO FINIINSUUN…WAREEGAMTOOTATTI. KABAJAA HORUUDHAA !!! Kutaa 2ffaa
QABSOO FINIINSUUN…WAREEGAMTOOTATTI. KABAJAA HORUUDHAA !!! Kutaa 2ffaa SEENAA Y.G (2005), kutaa 2ffaa, …
QABSOO FINIINSUUN…WAREEGAMTOOTATTI. KABAJAA HORUUDHAA !!! SEENAA Y.G (2005), kutaa 1ffaa Imalli Qabsoon Oromoo itti jiru waan…